Fitsipika an'i Crypto Market in 2018 - Vaovao farany - Blockchain News
Ny manam-pahaizana mino fa amin'ny 2018, isika, dia afaka manantena fa hitombo ny fitondram-panjakana fanaraha-maso ny tsena ICO, cryptocurrency fifanakalozana, ary ny mpivarotra. Mandritra izany fotoana izany, banky foibe lehibe eto amin'izao tontolo izao mety mankasitraka ny cryptocurrency-in manokana, bitcoin-ary vonona ny hividy azy io amin'ny herintaona. Efa nandinika Inona no toro-lalana ny fomba samihafa ara-bola ny vatana amin'ny crypto tsena dia hitombo ao 2018.
Tamin'ity taona ity vola manam-pahefana any amin'ny tany maro no nampiditra ICO fitsipika, ary naneho ny fiheverany izany ny fisarihana fampiasam-bola. Noho izany, Shina sy Korea Atsimo fomba ofisialy nandrara ny ICO natao teo amin'ny faritra. Mifanohitra amin'izay aza, ny USA, Kanada, Soisa, Japana, Singapore, ary U.A.E. namoaka fanapahan-kevitra maro izay ahafahantsika ICO amin'ny fomba ofisialy, amin'ny ICO rehefa nampanekena ketra manam-pahefana ny lalàna. Namoaka famantarana lavo eo ambanin'ny lalàna efa misy, ohatra, izay mifehy ny varotra interfund. Araka ny Jerry Brito, Tale mpanatanteraka ao amin'ny fikambanana tsy mitady tombontsoa Coin-Center, fitondram-panjakana, dia manaraka ny ohatra nasehony sy hampitombo Etazonia fanaraha-maso ny varotra antoka in 2018. Ao Etazonia, ny sasany famantarana manokana tao amin'ny ICO dia heverina Fiarovana sy ny fitsipika manan-danja eo ambany lalàna. Stephen Obie, ny mpiara-miombon'antoka amin'ny lalàna iraisam-pirenena Jones mafy Day, Toy izany koa milaza hevitra:
“Heveriko tokoa fahazavana bebe kokoa momba ny ho avy amin'ny alalan'ny hetsika sy ny fampiharana tari-dalana izay hanome ny SEC ao amin'ny tokenized tsena. Ny regulator mahalala momba izany tsena ka mahafaka azy io ho zava-dehibe.”
Manam-pahaizana mihevitra fa asa mitovy amin'ny ICO dia ho voan'ny fanajana ny cryptocurrency, manokana, bitcoin. dmitriy Zhulin, mpiara-manorina ny ins Tontolo Iainana, mitoetra amin 'ity olana ity:
“Araka ny Bitcoin mamono maso,, dia mamorona lalàna ICOs aloha ary avy eo dia hifindra eo amin'ny cryptocurrencies, na izany aza, dia sarotra ny maminavina ankehitriny, raha izany dia manana vokatra tsara na ratsy ho an'ny orinasa. Na dia eo aza ny fitomboan'ny lalàna ao amin'ny toerana crypto, Mino aho fa blockchain toy ny teknolojia dia tsy ho voasakana ny fitsipika mavesatra.”
Bitcoin varotra dia efa voarara any amin'ireo firenena, toy ny Bolivia, Ekoatera, India, Bangladesy, Islandy, Kyrgyzstan, Maraoka, Nepal, Malezia, Indonezia, ary Taiwan. Mandritra izany fotoana izany, Shina, izay no voarara ny varotra eo an-toerana cryptocurrency fifanakalozana, ary Rosia dia manomana vola taratasy ny cryptocurrency lalàna, izay mety ho tonga-kery amin'ny 2018. Ao amin'ny United States, bitcoin mpampiasa vola dia tsy maintsy mitatitra tombony ho an'ny anatiny ny hetra Service (IRS) ary mandoa hetra araka ny Notice 2014-21.
tamin'ny Desambra 4, ny UK sy ny Vondrona Eoropeana ara-bola dia nanambara dalàna momba ny zava-nitranga mieritreritra ny lalàna izay ambanin'ny cryptocurrency mpivarotra sy ny mpampiasa vola, amin'ny tranga sasany, ho maintsy nilaza ny mombamomba manokana, sy ny fifanakalozana cryptocurrency tsy maintsy hanome manam-pahefana miaraka amin'ny fidirana amin'ny mpampiasa vaovao. Araka ny fanjakana ara-bola ny vatana, ireo fepetra rehetra ilaina mba hisorohana ny famotsiam-bola-asa sy ny famatsiam-bola ny fampihorohoroana. Harmonization ny fomba samy hafa manatrika ity olana ity dia ho vita tanteraka ao am-boalohany 2018, ary ny lalàna dia ho tonga any kery tamin'ny faran'ny taona manaraka.
G7 afovoany banky sy cryptocurrency
Famantarana rehetra dia mampiseho ny fanamafisana ny lalàna crypto tsena amin'ny alalan'ny manam-pahefana ara-bola any amin'ny firenena samy hafa. dalàna, na izany aza, jereo ny mety amin'ny cryptocurrency ihany koa. In 2018, G7 banky foibe dia manomboka mividy cryptocurrencies mba hanatanjahana ny vahiny tahiry. Nisy fiovana lehibe ho an'ny banky foibe H7 ho rehefa tsena ny bitcoin capitalization mihoatra ny hasarobidin'ny rehetra SDR (sary manokana ny zo). Izany dia piarovana iraisam-pirenena pananana noforonin'ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena (IMF) mba hanampiana ny mpikambana ao amin'ny firenena’ ofisialy tahirin. Bitcoin capitalization, ohatra, Efa nihoatra ny hasarobidin'ny ny SDR (eo ho eo $291 lavitrisa).
Tipping fotoana iray hafa no ho fanatanterahana ny soatoavin'ny H7 vola no danja manohitra cryptocurrencies. In 2018, dia vavolombelona bitcoin sy ny cryptocurrencies lasa manan-danja indrindra amin'ny tsena iraisam-pirenena vola capitalization, araka ny manam-pahaizana.
National nomerika vola
Hafanàm-po an-pirenena amin'ny alalan'ny famoronana vola, firenena maro no na dia mikasa ny mandika ny firenena vola mba blockchain. Jim Angleton, Filohan'ny Aegis FinServ Corp, dia azo antoka fa ny Tany famokarana vola toy izany dia hitombo ihany:
“Fantatsika fa amin'izao fotoana izao 108 firenena no fanandramana amin'ny famoahana nomerika vola manohana ny fanesorana ny taratasy sy ny vola Fivoahan'ny fiankinana amin 'ny U $ D. Inoanay 20+ Firenena Hanomboka Testing mankany Beta ny tanjony.”
Last Oktobra, izahay, dia tonga ny mahafantatra fa i Rosia dia mahazo ny tenany Hafanàm-po an-pirenena vola, cryptoruble. Ny governemanta no ho tompon'izay famoahana sy ny fikorianan'ny ny cryptoruble any Rosia, amin'ny fitrandrahana cryptocurrency lasa azo atao. koa, Venezoeliana ny Filoha Nicolás Maduro namoaka fampianarana, araka izay ny fanombohana ny firenena cryptocurrency El Petro dia nikasa ny taona toy. Venezoeliana harena voajanahary boloky hazo, toy ny volamena, menaka, ary diamondra, dia niverina El Petro.
Ny ICO sy ny varotra no fomba ofisialy crypto voarara any Shina, fa izany no firenena voalohany izay nitranga fahiny nizaha toetra ny nomerika ny vola nasionaly. Yao Qian, lohan'ny ny Digital Sandam-bola fikarohana Departemantan'ny amin'ny olona ny Bank of China, nilaza fa ny ara-bola dia tsy maintsy hamoaka regulator cryptocurrency-pirenena izay manompo ho toy ny ara-dalàna raha vao fitiavana araka izay azo atao.
Tamin'ny volana Desambra ny foibe amoron 'ny Emirà Arabo Mitambatra sy Arabia Saodita nandefa mpanamory hetsika ho an'ny vola miampita sisintany. Ny anjara Arabia Saodita ny banky foibe dia miavaka, nomena fa talohan'ny tsy nisy fanambarana ofisialy momba ny cryptocurrency, crypto tsena, na blockchain ny firenena ara-bola dalàna. The U.A.E., amin'ny kosa, dia fampivelarana maro blockchain tetikasa ao amin'ny sehatra tsy miankina sy ny vahoaka, sy ny Filan-kevitry ny Global Blockchain Dubai no miandraikitra ny maro amin'izy ireny.
Fitsipika an'i Crypto Market